हिमाल खबरपत्रिका | कुरा गरेर मात्र क्रान्ति हुँदैन
कुरा गरेर मात्र क्रान्ति हुँदैन
अर्थशास्त्रको विद्यार्थी छँदा माछा उत्पादन थालेको व्यक्ति; कसरी आकाशलाई कर्म क्षेत्र बनाउनुभयो?
'कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिविलिटी' अन्तर्गत सेवाका अरू क्षेत्र किन हेर्नु भएन?
मेरो 'प्यासन' नै कृषिमा भएकाले। नेपाल विकासको एउटा महङ्खवपूर्ण आधार पनि हो कृषि। यसबाट मनग्ये कमाइ होस् भनेर हामीले प्रविधिलाई महङ्खव दिएका छौं। कृषिमा प्राविधिक ज्ञान र वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग गर्ने देशहरू धनी भएका छन्, परम्परागत विधि नछाड्ने देशहरूमा व्यापक गरीबी छ।
यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ?
यान्त्रिकीकरणका लागि मोरङको गोकुवा गाउँ नै छान्नुको कारण?
गोकुवाको खेतमा मेसिन लैजानुभन्दा पाँच वर्षअघि नै हामीले त्यहाँ २०/२५ लाख खर्चेर दुईवर्षे कार्यक्रम चलायौं, किसानहरूलाई विश्वस्त पार्न। मेसिन ल्याएर त्यसले काम नगरे खेत बाँझिने जोखिम थियो। त्यसकारण, शुरूमा परीक्षणको रूपमा आरुनै मेसिन र कर्मचारी राखेर किसानहरूलाई फाइदाबारे बुझायौं। त्यसपछि हामीलाई सकिने रहेछ र किसानहरूलाई हुने रहेछ भन्ने भयो।
भनेपछि, शुरूमा निकै गाह्रो भयो?
यान्त्रिकीकरणका समस्या छैनन्?
हामीले फाइदा–बेफाइदाको 'बेसलाइन सर्भे' गरेर मेसिन परीक्षण गर्‍यौं। असफल भएको धान रोप्ने मेसिन शुरूमै हटायौं। शुरूमा चारवटा मात्र रहेका सहकारी १० वटा पुगिसके, आउँदो चैतबाट ५० वटा पुग्दैछन्। तिनीहरूले १० हजार बिघा जमिनमा यान्त्रिकीकरण गर्नेछन्। अहिलेसम्मको सहकार्यबाट हामीले आम किसानमा मल, बीउ आदि किन्ने चालु पूँजीको ठूलो समस्या रहेको पायौं। अब टंकीसिनवारीबाटै चालु पूँजी कार्यक्रम थाल्दैछौं। अन्न ब्याऒ्ढलाई विस्तार गर्नेछौं। यी दुई सुविधा भएपछि किसानका आधारभूत कुरा पूरा हुनेछन्। त्यसपछि पोल्ट्री फार्म, डेरी लगायतका कुरामा जान सकिन्छ।
बुद्ध एयरकै नामबाट चलेको अभियानका लागि किन कम्पनी खोल्नु पर्‍यो?
यो अभियानलाई विस्तार गर्ने के योजना छ?
अहिले माइक्रोसफ्ट कम्पनीको 'विल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन' र 'वारेन बफेट'ले ६० अर्ब डलरको कोष बनाएर यस्तै कामको तयारी गरिरहेका छन्। तर, यसबाट धनी मात्र झ्ान् धनी हुन्छन्। हाम्रो काइदाले भने जसको जति जमिन छ, उसलाई त्यही अनुपातमा सम्पन्न बनाउँछ। २०० बिघामा जेसुकै खेती गर्नुस्, त्यो एउटा सामूहिक उद्योग हुन्छ। त्यसको आम्दानीले अरू व्यवसाय विस्तार गर्न सकिन्छ। ५० वटा सहकारीले आकार लिएपछि हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रले अर्कै गति लिने कुरामा म विश्वस्त छु। पूर्वका तीन जिल्लाका पहाडी, मधेशी र अरू सबै मूलका कृषक समूहमा एकताबद्ध भएर यो अभियानमा लागेका छन्। हामी यसैगरी २०७० सालसम्म मोरङ, सुनसरी र झापाका कम्तीमा १० हजार बिघामा एउटा 'सिस्टम' बसाइसक्छौं, १० लाख बिघामा लागू गरे पनि हुनेगरिको।
अभियानप्रति कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?
हामीलाई अहिले पैसा र प्रविधिको अभाव छैन, चुपचाप काम गरिरहेका छौं। ५० वटा सहकारी चलेपछि संभवतः २०७१ सालमा ठूलो 'प्रेजेन्टेशन' गर्छौं, एउटा ठूलो आवाज बन्ने गरी।
सरकारसँग सहकार्यको योजना छ?
कम्युन जस्तो लाग्ने यो कार्यक्रम आफैंमा गतिशील छ र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने उपाय सरकार बाहिर पनि छ भन्ने देखाएको छ। यसमा सरकारले चासो देखायो भने अझ राम्रो हुन्छ र सहकार्य नगर्ने कुरै आउँदैन। त्यस बाहेक हाम्रो 'फर्मूला' जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। हामीलाई आम नेपाली किसानको हित भयो र कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्यो भने पुग्छ।
भनेपछि, तपाईंलाई वास्तविक क्रान्ति आफूले गरिरहेको जस्तो लाग्छ?
क्रान्ति, परिवर्तन जे भन्नुस् त्यो भइरहेको छ। कुरा मात्र गरेर क्रान्ति हुँदैन। वास्तविक क्रान्ति त्यै नै हो जसले समाजलाई देखिने गरी रुपान्तरण गर्छ। अब म तीन वर्ष मात्र यसमा समय दिन्छु, किनभने त्यसबेलासम्म आफैं अघि बढ्ने एउटा 'सिस्टम' बसिसक्छ। यान्त्रिकीकरणमा हामी सफल भइसक्यौं। अब ५० वटा सहकारी स्थापना गरेर चालु पूँजी ब्यांकिङ र अन्न ब्याङ्कलाई मजबुत बनाउने हो।
आनन्द राई/डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ